Shan qodob oo laga bartay doorshadii Aadan Madoobe | KEYDMEDIA ENGLISH
Shan qodob oo laga bartay doorshadii Aadan Madoobe
Shan qodob oo waaweyn ayaa laga calaamadeeyay doorashadii Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo guuldarradii ay xalay Teendhada Afisyooni kala hoydeen kooxda Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Jab siyaasadeed iyo guuldarroyin kharaar oo muddooyinkii danbe dul hoganayay Kooxda waqtig ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, ayaa halkoodii wali ka sii socda, waxayna hirarku u muuqdaan kuwa karaaraha dhaafay oo aan la damin karin, ilaa ay si daran u harqiyaan kooxda sharci darrada Villa Somalia ku deggan.
Haddaba Keydmedia Online, waxa ay xuseysaa shan qodob oo laga bartay doorashadii Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo guuldarradii ay xalay Teendhada Afisyooni kala hoydeen Farmaajo iyo Laftagareen, oo sanadihii danbe saaxiib ku ahaa siyaasad-xumida, silcinta dalka iyo hadba xiisad iyo xasarad abuurka.
1 - Guddoonka Golaha Shacabka: Afar sano oo dalku uusan lahayn Gole shacab, oo u taagan shaqadii loo igmaday, hoggaan-xumo awgeed, ugu danbeyn xalay ayaa Golihii Sacabka ee 50-kii bilood ee la soo dhaafay loo baddelay Golihii Shacabka ee madaxa bannaanaa, waxaana laga fara-maroojiyay kooxdii xoogga ku heysatay.
2 - Duufaanta Farmaajo diidka: Xalay waxaa sii xoogeystay duufaanta siyaasadeed ee lagu diiddan yahay Farmaajo iyo Kooxdiisa, taasoo markii hore ka soo billaabatay doorashooyinkii Jowhar iyo Gaalkacyo, halkaasoo ay ku soo jabeen shaqsiyaad Madaxtooyada kabo-qaad u ah oo dulmigii shanta sano qeyb ka ahaa.
3 - Awoodda Is-baddel doonka: Mucaaradku, waxa ay xalay tijaabiyeen awooddooda, waxaya 74 cod ka sara mareen, cododka ay Farmaajo iyo Lafagareen la yimaadeen, sidoo kale, waxa ay muujiyeen in ay hal musharrax ku towfiiqi karaan, si uu u dhaboobo is-baddelka iyo in awoodda dalka laga wareejiyo Rajiimka shanta sano talinayay.
4 - Rajo-xumada Kooxda Farmaajo: Tartanka xalay wuxuu si gaar ah tijaabo ugu ahaa musharraxnimada Farmaajo ee xilka Madaxweynaha, wuxuuna sidii uu filayaba ogaaday in awood is-baddel doon oo aan loo babac dhigi karin uga horreyso Baarlamaanka 11-aad ee JFS, isagoo og in labo maalin ka hor saaxiibadiis ku soo jabeen doorashadii Aqalka sare.
5 - Guusha halgankii dheeraa: Shan sano oo halgan adag ah, oo dalka looga badbaadinayay inuu dib ugu laabto gacan kali talis, ugu danbeyn mucaaradka, ayaa si weyn ugu dabbaal degay guusha ay ka soo hooyeen tartanka xilka ugu sarreeya laanta ugu mihiimsan hay’adaha Dowladda, waxayna u diyaar garoobeen doorashada Madaxweynaha.
Sida la saadaalinayo, dhamaadka bisha soo socota ee May, ama bilawga bisha ka danbeysa ee June, dalku wuxuu yeelanayaa Madaxweyne, Farmaajo iyo kooxdiisa, wax ka yar 45 cisho ayaa uga dhiman noloshoodii Madaxtooyada, waxaana is weydiin mudan sida kaligiis taliyaha aan taagta lahayn looga dhaadhicin doono inuu ka guuro Villada.